Qalanjadii Cayaaraha Oo Ka Badbaadday Shil Gaadhi Iyo Dhaawac Jabiin Ah Oo Dhabarka Ka Gaadhay | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Qalanjadii Cayaaraha Oo Ka Badbaadday Shil Gaadhi Iyo Dhaawac Jabiin Ah Oo Dhabarka Ka Gaadhay
(21-11-2018) Gabadha ugu quruxda badan ciyaaraha baratanka baabuurta dheeraysa ee Formula 3 ayaa ka badbaadday shil gaadhi oo ay si xun ugu dhawaantay toddobaadkan.
Sophia Floersch oo ay da’deedu tahay 17 jir ayaa dhakhatarka loola carraray markii uu la dhacay baabuur ku socday 270 KM/h oo dhamaantii burburay, waxaana muuqaallada laga soo duubay gaadhigu muujinayaan nasiib wanaagga Sophia iyo sida uu Illaahay uga samata-biyey.
Tartan baratanka baabuurta ah oo ka dhacay Macau oo ka tirsan dhulweynaha China laakiin maamul goboleed madax-bannaan ah ayaa waxa wararkii warbaahintu ka tebinaysay dhamaantood ay ku jeedsadeen dhinaca Sophia oo ah qalanjo qurux-badan, waxaana dhakhtar ku yaalla isla gobolkaas oo la dhigay uu caddeeyey in dhaawaca ugu culus uu ka gaadhay laf-dhabarta.
Shilka ayaa yimdi markii ay isku dhaceen gaadhiga ay wadday Sophia oo noociisu ahaa Van Amersfoort Racing ay isku dhaceen baabuur kale oo uu dirawal ka ahaa Jehan Daruvala xilli loo taagayey calanka digniinta ah ee huruudda.
Shilkan oo si weyn u taabtay dalka Jarmalka oo weli aan haynin halyeygoodii baratanka baabuurta ee Michael Schumacher oo sannado badan u dhexeeya geeri iyo nolol markii uu galay shil argagax lahaa oo dhamaantii burburiyey, sannado banna koomo ku jira.
Farriin ay soo dirtay Sophia xilli dambe oo xaaladdeeda la dejiyey ayaa waxay ugu sheegtay taageereyaasheeda iyo shacabka dalkeeda inay fiican tahay, qalliina ay gelayso.
“Waxa aan doonayaa inaan cid walba ogeysiiyo inaan fiicanahay, laakiin berri subaxa aan qalliin gelayo.” ayey ku tidhi qoraal ay barteeda Twitterka ku baahisay, waxaanay u mahad-celisay shirkadaha baratanka baabuurta, iyo cid kasta oo taageero u muujisay.